Nezvedu - Dingzhou Yunlingyu Sports Goods Co., Ltd.
Dingzhou Yunlingyu Sports Goods Co., Ltd. seti yedhizaini, kusimudzira, kugadzira, kutengesa mune imwe yemabhizinesi ekumusana.Kambani yedu inopa zvakasiyana siyana zvemitambo zvigadzirwa kuti zvizadzise zvaunoda zvakasiyana.Zvigadzirwa zvikuru iDumbbell, Weight Plate, Barbell, Squat Rack, Smith Machine, Bench, Kettlebell.Mamiriro echigadzirwa akakwana, chimiro chinyowani, hunyanzvi hwacho hwakanakisa, kuona kwacho kwapera, mhando yepamusoro.
Nzvimbo yenzvimbo yekambani iyi inenge 4500 square metres, ine vashandi vanopfuura makumi mashanu, kusanganisira vashandi vangangosvika makumi matatu vane dzidzo yepamusoro.Zvese zvigadzirwa zvakapfuura kuongororwa kwedhipatimendi rekuongorora kwemhando.
Kambani yedu ine akawanda ematendi, ine yayo R & D timu, akasiyana ezvigadzirwa zvehunyanzvi.Midziyo yemitambo, yemukati neyekunze yekusimbisa muviri yakagadziridzwa nekambani yakaverengerwa sezvigadzirwa zvinozivikanwa.
Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa pasi rese, kunyanya kuUnited States, Britain, Australia, Germany, South Africa, India.Hunhu hwechigadzirwa hunozivikanwa zvakanyanya nevatengi, pamwe neakawanda counterpurchase.
Kubva payakavambwa, kambani yagara ichiomerera kune "mhando yekutanga, mutengi kutanga, mukurumbira wakavakirwa" bhizinesi mutemo, yakatsaurirwa kuzadzisa zvingangodiwa nevatengi.Pasi pemaitiro asingadzivisiki ekudyidzana kwenyika dzepasirese, kambani yedu yakazvipira kushanda pamwe nemoyo wese nemabhizinesi kubva pasirese pasirese kuti vawane mukana wekukunda.
Isu tinodada pachedu nekuenda yakawedzera maira kune vatengi vedu uye kugadzira yemhando yepamusoro kusimba uye gym michina.Huzivi hwedu ndehwekupfuura kungova yako avhareji yemidziyo yekusimba kambani.Kuburikidza netsvagiridzo yesainzi tinoda kukutsigira murwendo rwako rwese kuti usvike pazvinangwa zvako zvekusimba.Kuti uite izvi tinokupa iwe yemhando yepamusoro yekusimba midziyo, yenguva dzose mablog blog uye zvimwe zvakawanda!
Chenjerera kune yedu
Isu tiri kuwedzera nekukurumidza uye ndizvo zvakaita huwandu hwedu!Tine zvigadzirwa zvitsva zviri kugadzirwa uye zvichange zviri pasherufu munguva pfupi.Titevere paSocial Media kuti uwane zvese zvichangoburwa!